a - TECHNOMANIAC's - BLOG: September 2007
Macbook Power Adapter died + Back to SG
ကျွန်တော် မနေ့က စင်္ကာပူပြန်ရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ကွန်ပျူတာ သုံးမယ်လုပ်တာ ပါဝါကေဘယ်က မီးကျွမ်းပြီးပြတ်သွားတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်တော် မီးအားအတက်အကျရှိနေတာကို အတင်း စွတ်ထိုးပြီး ပါဝါပေးထားမိလို့လားမသိဘူး။ ဒီနေ့သွားစုံစမ်းကြည့်တော့ ဒေါ်လာ ၁၅၀ တဲ့ ... မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ တရုတ်က ထုတ်တဲ့ ဟာတွေလည်း မတွေ့ဘူး။ စင်္ကာပူမှာ ဘယ့်နှယ် အော် တွေပဲ ရောင်းနေတယ်ထင်ပ။ နောက်ဆုံး .. မရတဲ့ အဆုံး အဲ့ဒါပဲ ၀ယ်လာခဲ့ရတယ်။ ဟာ့ဒ်စ် အသစ်ဝယ်ဖို့ စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကုန်ပါပြီဗျာ ။။။ x(
Posted by Wai Phyo at1:48 AM0comments
iPhone for Europeans
Europe က ဆရာသမားတွေ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့လည်း အိုင်ဖုန်းကိုင်လို့ရပါပြီ။ ၂၆၉ ပေါင် ကနေစပြီး အင်္ဂလန်မှာ ရောင်းချနေပါပြီ။ O2 က တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာ ၁ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ The Cloud နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လက်တွဲမှုပါ။ 3G, 3.5G တွေ သိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဗ်စ် ရဲ့ သတ္တိရှိရှိလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ဥရောပဟာ အမေရိကားနှင့်မတူပါဘူး။ 3G ကို အင်မတန်အားကိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲ၁ခုပါပဲ။ The Cloud ဟာ ဥရောပရဲ့ အကြီးဆုံး ၀ိုင်ဖိုင် အင်တာနက် ပံ့ပိုးသူ ဖြစ်သလို အခုလို အိုင်ဖုန်းအတွက်လည်း ကွန်ယက်ပေါင်း ၇၅၀၀ ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲ၊ အယူအဆအသစ်တွေကို လက်ခံဖို့ အတော်ခဲယဉ်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ၀ိုင်ဖိုင် ပြောင်းသုံးမလားဆိုတာဟာ လေ့လာစရာ၁ခုပါ။ လှပတဲ့ နည်းပညာတွန်းလှန်ထားတဲ့ အိုင်ဖုန်းကပဲ ထိုအသားကျနေတဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲစေမလားဆိုတာကိုတော့ အချိန်နှင့်အမျှ စောင့်ကြည့်ပေဦးတော့ဗျာ။
နောက် ထပ်ကြားရတာလေး ၁ခုက ဂျာမနီမှာလည်း T-Mobile က အိုင်ဖုန်းကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်ကနေစပြီး ဖြန့်ချီပါတော့မယ်တဲ့။
Woods 08 , Madden 08 လည်း မက်ခ်အတွက်ထွက်လာပါပြီ။ နီးစပ်ရာ ပန်းသီးစတိုးတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Mac Office 2008 ကို မစောင့်နိုင်တဲ့လူတွေလည်း သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး update တွေကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပြီး အရသာခံလို့ရပါကြောင်း ။
ကျွန်တော် အချိန်ရတုံး ထူးထူးခြားခြားတွေ့တာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာကျွန်တော့်ရဲ့ Zawgyi KB Layout for OS X အွန်လိုင်း တင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲပါ။ Setup file ၁ဖိုင်၊ DMG ၁ခု နှစ်မျိုးလုပ်နေရတဲ့ အတွက် ကြာသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ OSX 10.2, 10.3, 10.4 & above အားလုံးရနိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။
Posted by Wai Phyo at2:21 PM0comments
1 Million - 74 Days - I'm nowhere near to One.
1 million iPhonez in 74 Days. Well, finally, that baby is really rocking as I hoped. Steve said it took2years for iPodz to accomplish this kind of milestone. That's awesome.
Last time, I was talking about 100 Millionth iPod. When do u guys think this little gadget will reach its predecessor's milestone? =)
Oh, dad says "no allowance" for iPod Nano. I must earn myself to get one. So, I am still nowhere near to at least one of that new shiny iPods.
Posted by Wai Phyo at12:42 PM0comments
Wah! iPodzzz + Starbucks!
ခုနကမှ အင်တာနက်ရတော့ တွေ့လိုက်ရတယ်.။ =(
Apple က products အသစ်တွေ ထုတ်ထားလိုက်တာလွန်ပါရော။ မကြည့်ရသေးသူများ သွားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ. ...
၁။ iPod Touch (WiFi, Touchscreen)
၂။ iPod Nano (Video)
၃။ iPod Classic (whopping 160GB!)
၄။ iPod Shuffle (slicker colors!)
၅။ iTunes Store WiFi (buy directly from iPod Touch)
၆။ Starbucks + iTunes (buy songs playing at Starbucks!)
၇။ iPhone price drop! (8GB only at US$299)
Arghh, အင်တာနက်နှေးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကီးနုတ်ကြည့်ချင်တာကြည့်လို့ ရဘူး။ အိုင်ပေါ့ Touch ၀ယ်ချင်တယ်ဗျာ။ စလုံးမှာ မရောက်သေးဘူး။ ဈေးလည်း အတော်လေးကောင်းမှာပဲ။ ..... အင်း ပိုက်ဆံစုဦးမှ။
Posted by Wai Phyo at7:51 PM0comments